Kedu ka esi etolite ọkụ ugwu | Netwọk Mgbasa Ozi
Kedu ka esi etolite ọkụ ugwu
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmadụ niile anụtụla ma ọ bụ hụ aurora borealis na foto. Othersfọdụ ndị ọzọ enweela obi ụtọ iji hụ ha na mmadụ. Mana ọtụtụ amaghị etu esi akpụbe ha na ihe kpatara ya.
Aurora borealis amalite na-egbukepụ egbukepụ na mbara igwe. Mgbe ahụ ọ na-ebelata ma ọkụ na-enwupụta na-ebili nke na-emechi mgbe ụfọdụ na gburugburu na-enwu gbaa. Ma olee otu esi hiwe ya na ihe ọrụ ya nwere?
1 Nkuzi nke Ugwu Ugwu
2 Ọmụmụ ihe na Northern Light
Nkuzi nke Ugwu Ugwu
Nmepụta nke ọkụ ugwu na-emetụta ọrụ nke anyanwụ, ihe mejupụtara na njirimara nke ikuku ụwa.
Enwere ike ihu ọkụ ugwu site na gburugburu okirikiri nke Earthwa. Ma olee ebe ha si bịa? Ha sitere na Anyanwu. E nwere bombardment nke subatomic ahụ si Sun guzobere na anyanwụ oké ifufe. Ngwurugwu ndị a sitere na-acha odo odo na-acha uhie uhie. Ifufe nke anyanwụ na-agbanwe mkpụrụ ahụ ma mgbe ha zutere mpaghara ndọta ụwa, ha na-agbagọ ma naanị akụkụ ya ka a hụrụ na okporo osisi.
Elektrọn ndị mejupụtara radieshon nke anyanwụ na - ewepụta ọpụpụ spectral mgbe ha ruru irighiri gas nke a na - ahụ na magnetosphere, akụkụ nke ikuku ụwa nke na-echebe Earthwa site na ikuku nke anyanwu, ma mee ka obi di uto na onu ogugu nke na-eme ka mmadu ghara inwe. Lumgha ahụ na-agbasa na mbara igwe, na-eme ka a na-ekiri okike.
Ọmụmụ ihe na Northern Light
Enwere ọmụmụ ihe na-enyocha ọkụ ugwu mgbe ikuku anyanwụ dị. Nke a pụtara n'ihi na, ọ bụ ezie na a maara na oké ifufe nke anyanwụ nwere Nkezi afọ iri na otu, ọ gaghị ekwe omume ịkọ mgbe aurora borealis ga-eme. Maka ndị niile chọrọ ịhụ Ugwu Northern, nke a bụ bummer. Travelga mkpanaka adịghị ọnụ ala ma enweghị ike ịhụ aurora na-akụda mmụọ.
Ma gị onwe gị, ị hụla ma ọ bụ chọọ ịhụ aurora borealis?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Kedu ka esi etolite ọkụ ugwu
Europe na-enweta ụzarị igwe ojii dị na Ruthenium 106
Supertornado na Supercomputer: Achọpụtara nnwale